U-Elaine Stevick Archives-US Ilungelo Lokwazi
Isilingo kwisiXeko saseMonsanto saseKhaya esisetelwe uAgasti Emva kwesigwebo se- $ 2 Billion
ezaposwa ngomhla Ngamana 17, 2019 by USusan Lang
Eli nqaku lapapashwa okokuqala kwi Iindaba zezeMpilo kokusiNgqongileyo.
Emva kwelahleko ezintathu zenkundla eCarlifonia, umlo osemthethweni malunga nokukhuseleka kwe-Roundup herbicide eMonsanto ubhekise kwidolophu yenkampani, apho amagosa amanyeneyo anokunyanzelwa ukuba avele kwindawo yokuma kwengqina, kwaye ukulandelwa kwezomthetho kubonisa imbali yokulwa- imigwebo yequmrhu.
"Izinto eziqhubeke apha, ndifuna amajaji aseSt. Louis ukuba ave le nto."
USharlean Gordon, umfazi ohlaselwe ngumhlaza okwiminyaka yama-50, ngummangali olandelayo okwangoku olungiselelwe ukuxoxwa kwetyala. Gordon v. Monsanto iqala nge-19 ka-Agasti eSt. Louis County Circuit Court, ebekwe nje iimayile ezimbalwa ukusuka eSt. Ityala lafakwa ngoJulayi ka-2017 egameni labamangali abangaphezu kwama-75 kwaye uGordon ngowokuqala kwelo qela ukuya kuthethwa enkundleni.
Ngokwesikhalazo, uGordon wathenga wasebenzisa iRoundup iminyaka eli-15 eqhubekayo malunga nonyaka ka-2017 kwaye wafunyaniswa enohlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma ngo-2006. UGordon uhambe izihlandlo ezibini zokufakelwa kweseli kwaye wachitha unyaka kwikhaya labongikazi. inqaku elinye kunyango lwakhe.
Unesiphene kangangokuba kunzima ukuba ahambe.
Ityala lakhe, njengaleyo yamanye amawaka afakwe e-United States, ityhola ukusetyenziswa kwe-herbicides esekwe kwi-glyphosate esekwe kuMonsanto yabangela ukuba akhulise i-non-Hodgkin lymphoma.
"Ube esihogweni," igqwetha laseSt. “Wenzakele kakhulu. Umrhumo wabantu apha mkhulu. Ndicinga ukuba uSharlean uza kuyibeka ngqo into eyenziwe nguMonsanto ebantwini. ”
U-Holland uthe elona candelo linzima malunga nokulungiselela ukuxoxwa kwetyala kukumisela obuphi ubungqina obuza kuboniswa kwi-jury kwisithuba seeveki ezintathu esenziwe lijaji kulingo.
"Obu bungqina ngokuchasene nabo, indlela abaziphethe ngayo, sesona senzo sibi kakhulu endikhe ndabona kule minyaka ingama-30 ndenza oku," utshilo uHolland. "Izinto eziqhubeke apha, ndifuna amajaji aseSt. Louis ukuba ave le nto."
Elo tyala likaGordon liza kulandelwa lityala likaSeptemba 9 nalo eSt. Louis County kwityala eliziswe ngabamangali uMaurice Cohen noBurrell Lamb.
Iingcambu ezinzulu zikaMonsanto eluntwini, kubandakanya indawo yokuqesha enkulu kunye neminikelo yesisa yokubonelela kuyo yonke le ndawo, inokuxhasa amathuba ayo kubameli basekuhlaleni.
Kodwa kwicala elisezantsi, iSt ithathelwa ingqalelo kwizangqa zomthetho njengenye yezona ndawo zintle kakhulu zabamangali zokuzisa amatyala ngokuchasene neenkampani kwaye kukho imbali ende yezigqibo ezinkulu ezichasene neenkampani ezinkulu. Inkundla yesiXeko saseSt. Louis ithathwa njengeyona ilungileyo kodwa iSt. Louis County nayo iyafunwa ngamagqwetha abamangali.
Inkqubo yesilingo sika-Agasti noSeptemba iza emva kwesigwebo esimangalisayo se- $ 2 yezigidigidi ekhutshwe ngokuchasene neMonsanto ngoMeyi 13. Kwimeko enjalo, ijaji e-Oakland, California, yanikezela isibini esitshatileyo u-Alva kunye no-Alberta Pilliod, bobabini abanesifo somhlaza, $ 55 yezigidi kumonakalo obuyiswayo kunye ne- $ 1 yezigidigidi inye kumonakalo owohlwayayo.
Ijaji lafumanisa ukuba iMonsanto ichithe iminyaka igubungela ubungqina bokuba i-herbicide yayo ibangela umhlaza.
Esi sigwebo safika nje ngaphezulu kwenyanga emva kwejaji yaseSan Francisco yayalela uMonsanto ukuba ahlawule i-80 yezigidi zeedola kumonakalo ku-Edwin Hardeman, owaphuhlisa i-non-Hodgkin lymphoma emva kokusebenzisa i-Roundup. Kwaye kwihlobo ephelileyo, ijaji yayalela uMonsanto ukuba ahlawule i-289 yezigidi zeedola kumgcini-mhlaba uDewayne "Lee" Johnson owafumana isifo somhlaza esibulalayo emva kokusebenzisa i-Monsanto herbicides emsebenzini wakhe.
U-Aimee Wagstaff, owayengumcebisi okhokelayo ku-Hardeman, kulindeleke ukuba azame ityala lika-Gordon eSt. UWagstaff uthe uceba ukubiza oosonzululwazi abaninzi beMonsanto ukuba bavele kwindawo yokuma ukuze baphendule imibuzo ngqo phambi kwejaji.
Yena namanye amagqwetha azama amatyala aseCalifornia abakwazanga ukunyanzela abasebenzi baseMonsanto ukuba bangqine bukhoma ngenxa yomgama. Umthetho ubonelela ukuba amangqina akanakunyanzelwa ukuba ahambe ngaphezulu kwe-100 yeemayile okanye aphume kurhulumente ukusuka apho ahlala khona okanye asebenza khona.
Ukulahleka kwetyala kushiye iMonsanto kunye nomnini wayo waseJamani uBayer AG engqingiwe. Abatyalomali abanomsindo batyhale amaxabiso ezabelo ukuya kumaqondo asezantsi kwiminyaka esixhenxe, ecima ngaphezu kwe-40 ipesenti yexabiso lentengiso likaBayer.
Kwaye abanye abatyali mali bafuna i-CEO ye-Bayer u-Werner Baumann ukuba bagxothwe ngokuxhasa ukufunyanwa kwe-Monsanto, eyavalwa ngoJuni wonyaka ophelileyo kanye njengoko ityala lokuqala laliqhubeka.
Bayer kugcina ukuba abukho ubungqina obubambekayo bokubangelwa ngumhlaza obunxulunyaniswa nokubulala i-Monsanto, kwaye ithi iyakholelwa ukuba iyakuphumelela kwisibheno. Kodwa uMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria Uyalele iBayer Ukuqala iingxoxo zokulamla ezijolise ekunikezeleni ekusombululeni ubunzima bezinto zamatyala ezibandakanya abamangali abamalunga ne-13,400 e-United States kuphela.
Bonke abamangali bangamaxhoba omhlaza okanye amalungu osapho kwaye bonke batyhola uMonsanto esenza izinto ngeendlela zokukhohlisa umngcipheko wokutshabalalisa ukhula, kubandakanya nokwenza irekhodi lobunzululwazi ngezifundo ezibhaliweyo, ukudibana nabalawuli, kunye nokusebenzisa abantu bangaphandle kunye nemibutho ukukhuthaza. ukhuseleko lweemveliso zalo ngelixa liqinisekisa ukuba zibonakala ngathi zisebenza ngaphandle kwenkampani.
Ukuxoxwa kwetyala ngoMeyi 22 kuyinxalenye yokuchaza iinkcukacha zenkqubo yolamlo. Bayer ibonakalisile ukuba iya kuwuthobela lo myalelo, kodwa ingekakulungeli ukuqaphela ukuhlawula amatyala ngaphandle kwelahleko yenkundla.
Okwangoku, isimangalo esivela e-United States siwele umda saya e-Canada apho umfama wase-Saskatchewan akhokele ityala lesenzo seklasi ngokuchasene neBayer neMonsanto benza izityholo ezibonisa abo bakumatyala aseMelika.
U-Elaine Stevick wasePetaluma, eCalifornia wayefanele ukuba abe lilandelayo emgceni wokuthatha iMonsanto xa kuvavanywa ityala.
Kodwa kulandelelwano lwakhe lokulamla, iJaji uChhabria uphume naye ngomhla we-20 kaMeyi. Umhla wokuxoxwa kwetyala elitsha kuya kuxoxwa ngawo kwindibano ngoLwesithathu.
UStevick kunye nomyeni wakhe uChristopher Stevick wamangalela uMonsanto Ngo-Epreli ka-2016 kwaye bathi kudliwanondlebe banomdla wokufumana ithuba labo lokujongana nenkampani ngomonakalo omkhulu abathi ukusetyenziswa kuka-Elaine kweRoundup kuyenzile kwimpilo yakhe.
Wafunyaniswa ngo-Disemba 2014 eneminyaka engama-63 ene-tumors ezininzi zobuchopho ngenxa yohlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma ebizwa ngokuba yi-central system ye-lymphoma (CNSL). U-Alberta Pilliod, ophumelele nje kuvavanyo lwamva nje, naye ubenethumba lobuchopho kwi-CNSL.
Esi sibini sathenga indlu yakudala yama-Victoria kunye nepropathi eyongezekileyo ngo-1990 kwaye ngexa uChristopher wayesebenza ekulungiseni ingaphakathi lendlu, umsebenzi ka-Elaine yayikukutshiza umbulali wokhula phezu kokhula kunye netswele lasendle abathi isibini sithathe isahlulo esihle sepropathi.
Wafafaza kaninzi ngonyaka de wafumanisa ukuba unomhlaza. Akazange anxibe iigloves okanye enye impahla yokukhusela kuba ekholelwa ukuba ikhuselekile njengoko ibhengeziwe, utshilo.
UStevick okwangoku uxolelwe kodwa waphantse wasweleka ngexesha elinye kunyango, utshilo uChristopher Stevick.
"Ndimbize 'ukumkanikazi waseRoundup' kuba wayehlala ehamba etshiza izinto," uxelele i-EHN.
Esi sibini saya kwiindawo zovavanyo lukaPilliod noHardeman, kwaye bathi bayayibulela inyani malunga nezenzo zikaMonsanto zokufihla umngcipheko oza kuluntu. Kwaye bafuna ukubona iBayer neMonsanto beqala ukulumkisa abasebenzisi malunga nomngcipheko womhlaza we-Roundup kunye nezinye i-glyphosate-based herbicides.
"Sifuna ukuba iinkampani zithathe uxanduva lokulumkisa abantu-nokuba kunokubakho into yokuba into enokuba yingozi okanye inobungozi kubo, abantu mabalumkiswe," utshilo u-Elaine Stevick kwi-EHN.
Pesticides Bayer AG, UElaine Stevick, U-Eric Holland, glyphosate, utywala, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, Yisonge yonke, USharlean Gordon, UWerner Baumann